Agaasimayaasha softiweerka tooska ah ma saaxiib saaxiib ama tartan baa? | Martech Zone
Saaxiibkey ayaa i weydiistey inaan dib u eego barnaamijkooda qeybta liistada saddexaad toddobaadkan, isagoo sheegay in degelku waxoogaa taraafiko ah u wado iibiyeyaasha kale ee warshadaha. Waxaan sameeyay falanqeyn deg deg ah bogga galka waana run, waxay kasbadeen darajooyin adag oo ku saabsan warshadaha saaxiibkay. Waxay umuuqataa kaliya macquul inay tahay inay codsadaan dib u eegis si ay sifiican uga muuqdaan tusaha.
Buuggu ma aha bog yar, waa weyn yahay. Waxay leedahay qiimeyn mashiin raadin weyn, shaqaale horumarineed, kaqeybgalka suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo xitaa miisaaniyad xayeysiin lacag bixin ah. Sababtoo ah taraafikadeedu aad ayey u culus yihiin waxayna u kaxeyn kartaa daawadayaal aad u tiro badan oo ku habboon goobaha, waxay sidoo kale leedahay nidaam xayeysiis ah oo gudaha lagu bixiyo oo saaxiibkay ka iibsan karo muuqaal caan ah ama xayeysiis ku soo bandhiga bogagga la xiriira
Waa maxay safarka rajadu?
Diiwaanka waxaa laga helaa makiinadaha raadinta ee ereyada muhiimka ah ee laxiriira barxadda.
Isticmaalaha mashiinka raadinta wuxuu ku dhajiyaa buugga meesha ay ka helaan barxaddaada oo ku dhow dhammaan tartamadaada.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha mashiinka raadinta ayaa gujinaya-shirkaddaada. Qaar badan ayaa ka lumay tartamayaashaada, gaar ahaan haddii ay ku leeyihiin miisaaniyad xayeysiin ballaadhan buugga dhexdiisa.
Waatan dhibaatada safarkan… maahan saaxiibka saaxiibka, ee waa tartamahooda. Madalku waxay si bareer ah u joojineysaa rajadaada, iyaga oo u weecinaysa boggooda, si dhagaystayaashu halkaas lacag uga helaan. Waxaad ku dhiirrigelisaa galka isticmaaleyaashaada si aad ugu dhigto dib u eegis - taas oo ay sameeyaan - taas oo hagaajinaysa qiimeynta raadinta ee galka. Waqtigaas, waxay si qoto dheer u dhex mareysaa adiga iyo rajadaada. Hadda waxaad ku tiirsan tahay tusaha si aad u quudiso meheraddaada.
Maxaa badal ah?
Waxaad dhiseysaa joogitaan toos ah oo khadka tooska ah ah, oo ka fiicnaanaya buugga.
Filashooyinku waxay iska indhatiraan galka oo si toos ah ugu gudub mawduucaaga, weligood ma aysan soo bandhigin tartanka.
Mawduucaaga ku habboon, ee ku qasbaya soo-booqdaha inuu noqdo hoggaamiye, u horseeda macaamiil.
Buuggaasi fursad uma lihi inuu kugu garaaco natiijooyinka mashiinka raadinta sida aad adigu sameyso, maxaad u caawin lahayd iyaga? Maxaad u bixin laheyd iyaga, aad u taageertaa boggooda, isla markaasna, ay u caawinayaan tartamayaashaada? Waxay la mid noqon laheyd qof istaagay dukaankaaga hortiisa, kuna waardiyeeynaya rajada agagaarka dhismaha tartamayaashaada, ka dibna kaa codsanaya inaad lacag siiso si aad u hubiso inay dib ugu soo celiyaan dukaankaaga. Waxaad ka saari lahayd albaabkaaga, sax?
Waa inaad u fiirsataa kheyraad kasta oo dabiici ah saaxiib iyo tartame labadaba. Dabcan, waxaa laga yaabaa inay fursad u leeyihiin inay kugu kaxeeyaan taraafiko aan caadi ahayn. Laakiin waa qiimahaaga. Waxaad u baahan tahay inaad go'aansato inaad kufiican tahay ku tiirsanaantaas iyo inaad diyaar u tahay inaad sii wadato bixinta kharashka gelitaanka ay dhagaystayaasha.
Ma yeelay Anigana uma qorin dib u eegista barnaamijka saaxiibkay.
Tags: wicitaanadatusaha abka internetkabuugga saas onlinetilmaamaha madalbuuggaagta softiweerka
Tirakoobka: Kobaca Adeegga Macaamiisha Warbaahinta Bulshadda